Manandriana Atoa Fanomezantsoa Andrianjanahary niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera. Ahiana ho pesta no nahavoa azy ireo. Mbola “cas suspect” izany hoe ahiana ho pesta raha tsy mivaly ny fitiliana avy any any amin’ny Institut Pasteur, fa ny tan-tsoroka ara-pahasalamana kosa dia efa mandeha, raha ny fanazavan’ny mpitsabo. 2 no maty fa fahafatesana tao anaty fiarahamonina (décès communautaire) na hoe maty tsy namonjy hopitaly fa nanao dokotera tena. Ny iray maty ny talata 11 martsa, dia tsy nahazo taratasy fanamarinana fahafatesana tamin’ny CSB satria nampiahiahy saingy mbola niandrasana am-bohitra hatramin’ny faran’ny herinandro teo, ka namindra tamin’ny olona maro, ka nisy zaza 12 taona no narefo ka maty, hoy kosa ny mpitsabo. Ny ankoatra izay efa nahazo fitsaboana daholo. 5 notsindromina ary 50 mahery nomena fanafody maimaim poana daholo, raha ny fanazavan’ny mpitsabo. Ny fanamarinana ofisialy avy amin’ny Institut Pasteur sisa andrasana, fa raha jerena amin’ny zava-misy dia tena pesta no misy sy mamely any Manandriana. Mila mailo sy mitandrina na ara-pahasalamana, ara-pahadiovana,… fa tena tandindonin-doza hatrany ny firenena. Vao tsy ela no nahatratra 630 tany ho any no matin’ny pesta teto amintsika, ka irariana mba tsy hisy intsony ny toy izany.